Ngwa nyocha 5 maka Ecommerce | ECommerce ozi ọma
5 ngwaọrụ nyocha maka ecommerce
Ọzọ anyị chọrọ ịkọrọ gị 5 ngwaọrụ nyocha maka ecommerce nke ahụ bụ isi maka nyocha nke azụmahịa kọmputa nke ụlọ ọrụ na ebumnuche iji nweta nsonaazụ kacha mma.
2 2. NdabereGrid
3 3. Nchịkọta Google
4 4. Pịa
5 5. Adobe Marketing .gwé ojii
Ọ bụrụ na ị na-achọ a nyocha zuru oke maka Ecommerce, mgbe ahụ ngwá ọrụ a bụ doro anya na otu nke gị mma ọzọ. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ngwá ọrụ e-commerce dị ike nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịbawanye njikọ ndị ahịa yana ọnụego njigide. Ekele maka akụkọ zuru ezu, enwere ike ịme mkpebi ka mma ọ bụghị naanị na nhazi, kamakwa n'usoro ịzụ ahịa azụmahịa n'ịntanetị.
Ọ bụkwa ihe ọzọ magburu onwe ngwa nyocha maka Ecommerce nke dị na nke a pụtara maka inye ozi nghọta dị mfe site na eserese mara mma, yana ịnye ndụmọdụ maka otu esi enweta ngalaba dị iche iche. Na ngwa ọrụ a ị nwere ike ịchọpụta ụdị azụmaahịa na-arụ ọrụ kacha mma na mkpọsa na-enye nsonaazụ kacha mma.
3. Nchịkọta Google
Obi abụọ adịghị ya bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma maka nyocha e-commerce na awade zuru ezu ọmụma gbasara mbido ndị ọbịa ahụ, ọdịmma ha, omume nchọgharị ha na ihe kachasị mma bụ na ha nwere ike ịdị mfe ijikọ na ọtụtụ nyiwe e-commerce.
Otu uru kasịnụ nke ecommerce a bụ na ọ dị mfe iji, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị ahụmịhe gara aga. Ọbụghị naanị nke ahụ, na mgbakwunye na atụmatụ metụtara e-commerce, ngwá ọrụ a na-enye ndị nwe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ezigbo ozi.
5. Adobe Marketing .gwé ojii
Iji mechaa nke a bụ ngwá ọrụ maka e-azụmahịa na-enyekwa nyocha na ozi zuru ezu n'ebumnuche nke ịmara na ịkwalite arụmọrụ nke azụmaahịa dị n'ịntanetị. A na-ejikarị ya nnukwu ụlọ ahịa e-commerce eme ihe, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a ọ chọrọ ihe ọmụma a kapịrị ọnụ iji nweta ọtụtụ n'ime ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nche » 5 ngwaọrụ nyocha maka ecommerce
Nka CMS, ihe njikwa ọdịnaya nke ị ga-anwale
Mgbanwe nke Ecommerce kemgbe ọtụtụ afọ